Garfield kaThixo Hangout
Sebenzisa i-Hangout kaGarfield njengenkampu esisiseko. Phakamisa amandla kusasa kwaye uphumle ixeshana emva kokuba usuku lwakho lwenziwe. Ngaba uyathanda ukukhwela intaba, ukungena kwimyuziyam, ukujonga amaphandle, okanye ukufumana indawo yokutya? Kuninzi okubonayo nokwenza kwiLizwe laseMantla. Ungandwendwela iPlattsburgh okanye iLake Placid, mhlawumbi iBurlington, okanye iMontreal. Kungekudala amaqabunga aya kutshintsha (amaqabunga amaqabunga) kwaye ikhephu liya kuqala ukubhabha (i-ski okanye i-snowshoe). Nika ingcamango yokwenza i-Hangout kaGarfield ibe yindawo yokumisa kwakho okulandelayo.
Kwaye uhambo olumnandi!
Ikhaya lam lifama enamagumbi amabini okulala kunye negaraji eqhotyoshelweyo. Uya kuyifumana ikhululekile kakhulu ngexesha lokuhlala kwakho kwi-Hangout kaGarfield. Ligumbi elinobungakanani obuhle, elipeyintwe kwakhona kulo nyaka uphelileyo kwaye linegumbi elikhulu. Ikhitshi libanzi kwaye libandakanya konke okudingayo ukuze uzenzele ukutya okumnandi. Uya kuba nendawo efrijini, ifriji kunye nekhabhathi yokugcina izinto zakho. Ishawari inamanzi amaninzi ashushu kunye nebhentshi yokuphumla amathambo akho adiniweyo.
Ikhaya lam alikho edolophini ngoko uya kuva umqhagi ukhala ekuseni, ngamanye amaxesha ubone iikati zasekuhlaleni zinqumla eyadini kwaye ngamaxesha athile izinja ezincinci zabamelwane ziza kukhwaza ngokukhawuleza "molo". Bamkile ngophanyazo, nangona kunjalo.
Kwaye ke uhambo lweyure nje ukuya kulo naliphi na icala, kuninzi okubonayo nokwenza. Ski eWhiteface ebusika okanye ukhwele igondola ehlotyeni. Iziko le-Echo Lake Aquarium & Science Centre eBurlington lingaphaya kweLake. Jonga i-High Falls e-Chateaugay okanye uzame i-ziplining kwi-Experience Outdoors eLake Placid. Usuku lokukhwela kwi-Route 3 kwi-Adirondack Park luyolisayo: iimbono ezintle zeentaba, izilwanyana kwiindawo zazo zendalo, iidolophu ezincinci zelizwe, iindawo ezithandekayo zokuluma, okanye umise kwaye ubukele umlambo uhamba. Nangona uchitha usuku lwakho, i-Hangout kaGarfield iya kuba yindawo yakho yokuphumla kwaye uhlaziye ngomso.
Ndabelana nawe ngekhaya lam kwaye ndilindele umlinganiselo othile wokuqwalaselwa kuwo omabini amacandelo ethu ukuze ndifumane eyona ndawo ikhululekileyo kuye ngamnye wethu. Sinokuthetha ngezicwangciso zethu zemihla ngemihla ukwenza kube lula ngathi ukusebenzisa ikhitshi kunye nebhafu ekwabelwana ngayo.
Kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kufumaneka ukukunika umkhomba-ndlela oya kuyo nayiphi na indawo yethu ebalaseleyo kodwa kubonakala ngathi uninzi lwabantu lusebenzisa iGPS yeefowuni zabo. Ungathembela kum ukuba kuyimfuneko, nangona kunjalo.
Ndabelana nawe ngekhaya lam kwaye ndilindele umlinganiselo othile wokuqwalaselwa kuwo omabini amacandelo ethu ukuze ndifumane eyona ndawo ikhululekileyo kuye ngamnye wethu. Sinokut…